C/maalik oo dawladdu dammaanad ku sii daysay | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Wararka C/maalik oo dawladdu dammaanad ku sii daysay
C/maalik oo dawladdu dammaanad ku sii daysay
Guddoomiyaha maxkamadda gobolka Benaadir, Xaashi Cilmi Nuur ayaa maanta dammaanad ku sii daayay milkiilaha warbaahinta Shabeelle, Cabdimaalik Yuusuf Maxamuud oo muddo ka badan labo bilood u xirnaa dawladda dhexe ee Soomaaliya. Waxaa lagu eeddeeyay in idaacaddiisu ay si qaldan ugu tebisay bulshada hawlgal hub ka dhiggis ahaa oo ciidamadda isbaheysigu ka fuliyeen xaafaddaha qaarkood ee magaalada Muqdisho.
Go’aankaasi waxaa ku dhawaaqay guddoomiyaha maxkamadda gobolka sidoo kalena ah garsooraha dacwaddaasi qaadayay, Xaashi Cilmi Nuur isaga oo sidoo kale dib u dhiggay qaadista dacwad ka dhan ahayd Cabdimaalik, wuxuuna amar ku bixiyay in eedeysanaha laga reebo baasaboorada lana dhiggo waraaqo digniin ah gegida diyaaraddaha inta dacwaddu ku socoto si aanu waddanka uga bixin eedeysanahaasi.
Maxkamadda oo la horkeenay Cabdimaalik Yuusuf Maxamuud iyo Axmed Cabdi Xasan oo ah suxufi la shaqeeya idaacaddaasi ayaa si kooban u dhageysatay dacwad ay xeer ilaalinta qaranku ku soo oogtay suxufiyiinta waxaana aqalka maxkamadda soo buux dhaafiyay intii ay dacwaddu socotay dad isugu jiray xildhibaanno, ehelo, xubno ka socday ururada bulshada iyo shaqsiyaad kale.
Inkastoo ay goobjoog ahaayeen dhawr qareen oo difaacayay raggaasi, haddana garsoore Xaashi ayaa labada eedeysane weydiiyay inay galeen danbiyada loo haysto, balse way iska bari yeeleen dhammaan arrimaha lala xiriirinayo suxufiyiintaasi.
Dhinaca kale, Axmed Cabdi Xasan ayaa dib loogu celiyay xabsiga maadaama aanu dacwaddiisa la furin, horey waxaa xabsiga ugu sii jiray labo weriye oo ka tirsan idaacadda loona haysto isla arrintaasi.
Previous articleBaydhabo oo yeelanaysa dastuur lagu maammulo
Next articleBaraawe oo ammaankeeda si weyn loo suggayo